Wararka Dibada | Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan | Page 50
Halkan Ka Dhageyso Dhuuxa Wareysiyada
Halkan ka dhageyso warka duhurnimo.
Diyaaradaha Isbaheysiga Maraykanka Oo Dad shacab ah ku laayay bariga Suuriya.
Saraakiil Sar sare oo katirsan Sirdoonka Dowladda Oo shaqada laga eryay, Kadib Weeraradii Nawaaxiga Madaxtooyada.
Dagaal Ka dhacay Muqdisho iyo Sarkaal katirsan Dowladda Oo la dilay.
Dhimasho iyo Dhaawac ka dhashay weerar ka dhacay dalka Jarmalka.
Wararka ka imaanaya dalka Jarmalka ee qaaradda Yurub ayaa sheegaya in weerar kaligii duulnimo ah uu ka dhacay magaalada Parlin oo ah caasimadda dalkaas, kaas oo uu fuliyay Ruux dhalinyaro muslim ah. Weerarka ayaa ka dhacay goob SuperMarket ah, islamarkaana dad badani ka adeeganayeen, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Weerarkan oo dhacay gelinkii dambe ee shalay ...	Read More »
Imaaraatka: Waxaan rabnaa in bariga dhexe ay ka dhismaan dowlado Cilmaani ah.
Safiirka dowladda Imaaraatka u fadhiya dalka Maraykanka Yuusuf Al-Cutba ayaa waraysi uu siiyay TV ku yaala dalka Maraykanka wuxuu kaga hadlay aragtida iyo hadafka ay hiigsanayaan dowladaha go’doonka kusoo rogay dowladda Qadar. Al-Cutba oo waraysi dheer siiyay TV-ga PBS ee kasoo baxa dalka Maraykanka, islamarkaana waraysigaas qeybo kamid ah lagu baahiyay websitka safaaradda Imaaraatka ee Maraykanka ayuu sheegay iney doonayaan ...	Read More »
Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka waa barnaamij todobaadle ah, waxaana lagu soo gudbiyaa dhacdooyinka ka taagan dunida muslimka. Halkan ka dhagayso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 28-07-2017.lite	Read More »
Muslimiinta oo ku guuleysta dagaalka Al-Qudus iyo Yahuudda oo jabtay.
July 27, 2017	2 Comments
14- maalmood oo xiriir ah oo ay dadka Muslimiinta ahi difaac kaga jireen afaafka hore ee masjidka barakeysan ee Al-Aqsaa waxaa maanta guusha ay raacday Muslimiinta, iyadoona ciidamada Yahuudda ay ku guul darreysteen dantii ay lahaayeen. Maamulka Yahuudda ayaa gebi ahaanba meesha ka saaray qalabyadii Electronica iyo kaamirooyinkii uu ku xiray Albaabada laga soo galo masjidka barakeysan iyo wadooyinka soo ...	Read More »
Jamaaco Jihaadi ah oo looga dhawaaqay gobolka Kashmiir ee Hindiya.
Sida ku cad bayaan ay baahisay Jabhal Iclaamiyah oo ah mu’assaso nashrisa filimaanta iyo bayaanadka jamaacaadka islaamiga ah, waxaa Jamaaco jihaadi ah looga dhawaaqay gobolka Kashmiir oo kamid ah dhulka ku jira gumeysiga hinduuska. Jamaacadan ayaa magaceeda ku sheegtay Ansaar Qazwatul Hindi, waxaana ay sheegtay in hadafkeeda uu yahay in dhulka muslimka ah ee Kashmiir laga xureeyo gumeysiga uu ku ...	Read More »
Ciidamo Maraykan ah oo lagu dilay dalka Afqanistaan.
Waxaa sii kordhaya tirada dhimashada ciidamada Maraykanka ee ku sugan dalka Afqaanistaan maalmihii ugu dambeeyay kadib markii ay sii bateen weerarada Jihaadiga ee ay qaadayaan dagaalyahannada Imaarada islaamiga ee Dhaalibaan. Guud ahaan gobollada kala duwan ee Afqaanistaan waxaa ka dhacaya dagaallo waaweyn, kuwaas oo Ciidamada Imaaradu kula wareegeen dhul ballaaran oo katirsan dalka Afqaanistaan, waxaana barbar socoda tirade dhimashada ciidmaada ...	Read More »
Waa Imisa khasaaraha soo gaaray ururka shiiciga ee Xisbullaata shantii maalmood ee lasoo dhaafay?
July 26, 2017	1 Comment
Shantii maalmood ee aynu soo dhaafney, waxay dagaallo xoogan ka socdeen deegaannada dhaca xuduud beenaadka dalka Suuriya iyo Lubnaan, kuwaas oo dhexmarayay ciidamada Mujaahidiinta iyo malleeshiyaadka shiiciga ee ururka Xisbutallaata. Dagaallada oo ahaa kuwa culus, islamarkaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, waxaa khasaare ba’an lagu gaarsiiyay malleeshiyaadka shiiciga, halka dadka muslimiinta ah ay jiraan waxyeello soo gaartay. Dagaalka ...	Read More »
Tobanaan Ruux oo ku waxyeeloobey Iska hor imaadyo ka dhacay afaafka hore ee masjidul Aqsaa.
July 25, 2017	1 Comment
Iyadoo maalintii tobanaad ay dadka Muslimiinta ahi wadaan dibadbaxyo ballaaran oo ka soconaya afaafka hore ee masjidka barakeysan ee Al-Aqsaa, kaas oo looga soo horjeedo tallaabooyin xadgudub ah oo ay Yahuudu kusoo rogeen masjidka barakeysan ee Al-Aqsaa ayaa waxaa lasoo sheegayaa iney sii kordhaan dadka ku waxyeeloobey weerarada ka imaanaya dhanka Yahuudda. Wararkii ugu dambeeyey ee warbaahinta ay soo gudbinayaan ...	Read More »
Ciidamo Ruush ah oo lagu wareejiyay deegaanno dhaca duleedka magaalada Dimishiq.
Wararka ka imaanaya dalka Suuriya waxay sheegayaan in ciidamo booliis ah oo u tababaran sida milliteriga kana socoda dowladda Ruushka lagu wareejiyay deegaannada Quudhada galbeed ee dhaca duleedka magaalada Dimishiq. Boqolaal Askari oo katirsan ciidamada Ruushka ayaa baro kontorool oo dadka lagu baaro iyo xarumo ciidan ka sameystay deegaannada Quudhada galbeed, waxaana deegaanadan ku sugnaa qaar kamid ah kooxaha mucaaradka ...	Read More »
Weerar Nafhurnimo oo ka dhacay magaalada Kaabul ee dalka Afqaanistaan.
Aroornimadii hore ee saaka ayaa weerar Nafhurnimo wuxuu ka dhacay magaalada Kaabul ee caasimadda dalka Afqaanistaan. Weerarkan oo ahaa mid culus oo laga maqlay inta badan magaalada Kaabul waxaa lala eegtay saraakiil katirsan sirdoonka xukuumadda Kaabul, gaar ahaan saraakiisha qaabilsan tacdiibinta dadka Muslimiinta iyo Mujaahidiinta ee xabsiyada xukuumadda Kaabul ku jira. Sida uu sheegay Afhayeenka Imaarada Islaamiga Dabiixullaahil Mujaahid, Istish-haadi ...	Read More »
Page 50 of 98« First...203040«4849505152	»	607080...Last »